रेडियो स्वीडेन, स्विडिश रेडियो"
रेडियो स्वीडेन, स्विडिश रेडियो»
पार्टी नेता एनी असफल नयाँ सरकार गठन गर्न.
आज त्यो भने त्यो असफल भयो । भविष्यमा, सबै विवाह बच्चाहरु संग स्वीडेन मा हुनेछ, व्यवस्था द्वारा निषेध. कुनै एक हुन सक्छ विवाहित संग एक बच्चा छ । तापनि, तिनीहरूले पहिले नै विवाहित थिए जब म आए स्वीडेन । यूरोपीय संघ अदालत अन्य देशहरुमा. मात्र स्वीडेन मा छ यो बेच्न अनुमति.
कुनै अन्य ईयू देशहरू
धेरै मानिसहरू स्वीडेन मा रेल एक जबकि लागि. लगभग आधा को सबै छन् गरिब स्वास्थ्य मा. व्यायाम शोधकर्ताओं छन् भने गर्न छोडेका छन् स्टकहोम, स्वीडेन मा. अन्तिम रात, स्वीडेन जिते एक महत्त्वपूर्ण फुटबल म्याच छ । पुरस्कार भन्ने स्वीडेन प्राप्त हुनेछ च्याम्पियनशिप मा हुनेछ एक अतिरिक्त मौका छ । त्यहाँ छ एक ठूलो समस्या छ. स्वीडेन मा शिक्षकहरूको अभाव. यस अर्थ मा केही विद्यालय, केही विषयहरू छन् सिकाउनुभयो छैन. शिक्षा मंत्रालय भनेर विश्वास विद्यालय प्रदान गर्नुपर्छ अधिक डिजिटल पाठ इन्टरनेट मार्फत. भने शिक्षक पकड सक्छ एक पाठ संग विद्यार्थीहरूको विभिन्न शहर मा नै समय मा.
यो पूर्ण स्विडिश जेलमा
त्यसैले, यदि अधिक अपराधीहरूलाई प्राप्त अर्को जेल अवधि. उदाहरणका लागि, तपाईं एक इलेक्ट्रनिक ट्याग.
जस्तै आवाज प्रबन्धक को एक
दुई छोराका हो हत्या को संदिग्ध. यो मुद्दा चलाउने व्यक्ति भनेर भन्छन् घरबारविहीन मानिस मा मृत्यु कुटपिट थियो, स्वीडेन । धेरै सय मान्छे हिजो स्वीडेन विरुद्ध प्रयोग घातक शक्ति । तिनीहरूले भेला मा स्टकहोम मा घरमा । यो थियो जो आमा संगठित प्रदर्शन । आफ्नो छोराछोरी मारिए । शरण खोज्नेहरूको छन् जो रहन अनुमति छैन स्वीडेन मा प्राप्त गर्न सक्छन् पैसा घर फर्कने । अनुदान भनिन्छ समर्थन छ । यो वर्ष, लगभग सबैलाई प्राप्त अनुदान । स्वीडेन मानिसहरूलाई मा धेरै राम्रो हो रीसाइक्लिंग प्याकेजिङ्ग सामाग्री । विगतमा यो वर्ष, अधिक प्याकेजिङ्ग थियो पुनर्नवीनीकरण अघिल्लो वर्ष भन्दा. यो स्विडिश सरकार एजेन्सी को लागि पर्यावरण संरक्षण अक्सर धेरै साफ नोभेम्बर मा. धेरै मानिसहरू भन्न कि यो एक खैरो महिना । यो असामान्य सनी यस वर्ष । सेप्टेम्बर चुनाव स्वीडेन मा. यहाँ तपाईं सबै पढ्न सक्नुहुन्छ बारेमा समाचार गर्यो । कसले भाग लिन सक्छन् मा स्विडिश चुनाव? ? रेडियो स्वीडेन सजिलो»स्वीडेन»कसरी बताउँछन् चुनाव आयोजित छन् ।
← विकल्प सबै भन्दा राम्रो वैकल्पिक साइटहरु
रूसी पुरुष संग दूर प्राप्त रूपमा धेरै एक महिला जो कहिल्यै" →